को GED® परीक्षण लिन
म GED® परीक्षण कसरी लिन गर्छन्? What do I need to know about taking the GED® test? Here are the tools and information you need to take and pass the GED® test.
यहाँ छन् 10 steps to help you get ready to take the GED® test.
Some states offer another test instead of GED®. तिनीहरूले HiSET ™ वा TASC प्रदान गर्न सक्छ. धेरै राज्य एक विकल्प प्रस्ताव. Find out here if the GED® test is offered in your state:
You will usually be eligible to take the GED® test if you are 18 उमेर वा पुरानो र वर्ष एक अमेरिकी उच्च विद्यालय स्नातक छैन. केही अवस्थामा, तपाईं भने परीक्षण गर्न सक्षम हुन सक्छ 16 वा 17. केही अमेरिका तपाईं परीक्षण तयारी कक्षाहरू धाउन कि सोध्न. अन्य राज्य मात्र बासिन्दा परीक्षण लिन अनुमति. तिमी सक्छौ find the GED® test requirements in your state.
के ज्ञान तपाईं आवश्यक र तपाईं आग्रह गरिने प्रश्न प्रकारको - तपाईं परीक्षण लिन जब आशा के पत्ता. You need to know what’s on the GED® test.
तपाईं GED® परीक्षण अनलाइन लिन सक्दैन, तर तपाईं अनलाइन यसको लागि तयार प्राप्त गर्न सक्छन्. हाम्रो निःशुल्क अनलाइन वर्ग र निःशुल्क अनलाइन अभ्यास परीक्षण will help you.
तपाईं परीक्षण अनलाइन लिन सक्दैन. तपाईं एक परीक्षण केन्द्र मा व्यक्तिमा परीक्षण लिनुपर्छ. अब एक परीक्षण केन्द्र फेला (you will have to register first).
6. ged.com मा खाताको लागि दर्ता
परीक्षण नियुक्ति गर्न, तपाईं मा एक अनलाइन खाता सिर्जना गर्नुपर्छ ged.com. तपाईं कुनै पनि समयमा आफ्नो खाता सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ - के तपाईं आफ्नो परीक्षण लिन तयार छन् नभएसम्म प्रतिक्षा छैन. तपाईंको खाता भनिन्छ MyGED.
ged.com आफ्नो दर्ता समयमा, तपाईं प्रश्नहरूको जवाफ हुनेछ (तिम्रो नाम, ठेगाना, शिक्षा, आदि) तपाईं एक परीक्षण नियुक्ति गर्न तयार छन् सम्म तर भुक्तानी गर्न आवश्यक छैन.
जब तपाईं तयार छन्, तपाईं परीक्षण लिन एक नियुक्ति बनाउन ged.com वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं विभिन्न दिनमा परीक्षण प्रत्येक भाग लिन सक्छ, but you will need to take all four tests withinatwo-year period to get your GED® diploma.
तपाईं लिन चाहनुहुन्छ पहिलो परीक्षण वा परीक्षण निर्णय. त्यसपछि स्थान र मिति र समय चयन. तपाईं एकै समयमा दुई परीक्षण तालिका भने, you will only geta10-minute break between them. धेरै लामो छैन. तपाईं थप समय चाहनुहुन्छ भने, हुन अलग आफ्नो परीक्षण तालिका निश्चित - तपाईं अझै पनि उही दिन चयन गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं पटक लामो ब्रेक लागि अनुमतिको चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं एक दिन मा सबै परीक्षण लिन चाहनुहुन्छ भने, कसरी तालिका हेर्न आफ्नो परीक्षण तपाईं एक खाजा ब्रेक हुन सक्छ त.
अर्को, तपाईं परीक्षण तालिका एक शुल्क तिर्न हुनेछ. यो अवस्थाबाट राज्य गर्न भिन्न, तर यसको बारेमा छ $30 चार परीक्षण प्रत्येक लागि ($120 ती सबै लागि). तपाईँले तालिका रूपमा एक समयमा एउटा परीक्षण भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ.
8. एउटा सरकारी अभ्यास परीक्षण लिन
तपाईं वास्तविक परीक्षण लिन अघि, it isagood idea to take the official GED Ready® Practice Tests if you can. तपाईं यो छैन, तर यो तपाईं वास्तविक परीक्षण लागि तयार छन् बनाउन मदत गर्नेछ. तपाईं आफ्नो MyGED खाता मा "अभ्यास" ट्याब अन्तर्गत अभ्यास परीक्षण पाउन सक्नुहुन्छ.
The GED Ready® Practice Tests are half as long as the real tests. तिनीहरूले खर्च $6 चार परीक्षण प्रत्येक लागि ($24 ती सबै लागि), त्यसैले मात्र लागि अध्ययन र लागि एक नियुक्ति निर्धारित गरेको व्यक्तिहरूलाई लिन.
The tests will give you practice so you will be prepared on test day. परिणाम तपाईं भन्नेछु तपाईं परीक्षण लिन तयार छन् भने, वा तपाईंले तयार छैनन् भने अध्ययन गर्न के. तपाईं आफ्नो वास्तविक परीक्षण लागि तयार छैनन् तपाईं निर्णय भने, तपाईं सम्म आफ्नो परीक्षण नियुक्ति अप परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ 24 घण्टा अगाडि.
कुनै पनि कम्प्युटरमा अभ्यास गरेर परीक्षण अनुभव सहज प्राप्त.
प्रश्न स्वरूप र निर्देशन तपाईंसँग परीक्षण मा देख्ने अभ्यास the free GED® tutorial. को प्रयोग राख्न free USAHello practice tests धेरै!
तपाईं संग कुरा धेरै लिने छैन, व्यक्तिगत वस्तुहरू परीक्षण कोठा मा अनुमति छैन. तर आफ्नो आईडी ल्याउँछन् – एक पासपोर्ट, चालकको सवारी इजाजत पत्र, वा अन्य सरकारद्वारा जारी गरिएको आईडी.
तपाईंले एक प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एक तिवारी-30XS मल्टीव्यू वैज्ञानिक कैलकुलेटर ल्याउन. त्यहाँ एक हुनेछ on-screen calculator for you to use instead if you prefer.
तपाईं कागज र कलम ल्याउन अनुमति हुनेछ, but you will get erasable boards andamarker for making notes.
आइपुग्छ कम्तिमा 30 मिनेट परीक्षण केन्द्र मा प्रारम्भिक त तपाईंलाई जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र प्राप्त बसे. त्यहाँ परीक्षण कुनै विश्रामहरू छन् रूपमा बाथरूम प्रयोग.
तपाईं कम्तिमा स्कोर गर्न आवश्यक हुनेछ 145 पारित गर्न परीक्षण प्रत्येक भाग मा अंक. तपाईंको स्कोर भित्र ged.com मा उपलब्ध हुनेछ 24 आफ्नो परीक्षण लिएर घन्टा. जब तपाईं सबै भागहरु पारित गरेको छ, you will receive your GED® diploma. एक धेरै उच्च स्कोर संग, तपाईं भन्छन् तपाईं प्रमाणपत्र प्राप्त "कलेज तयार।"
यदि तपाईं असफल तपाईं सबै परीक्षण फेरि कब्जामा लिनु वा केही विषय सक्नुहुन्छ. के तपाईं पारित नभएसम्म परीक्षण लिइरहेको राख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं प्रतीक्षा हुनेछ 60 दिन आफ्नो पहिलो तीन प्रयासहरू पछि. प्रत्येक राज्य मा परीक्षण retaking लागि विभिन्न नियमहरू छन्.